Madaxwayne Kenyata Oo Ogolaaday In Hoos Loo Dhigo Cashuuro Muran Dhaliyay – Heemaal News Network
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ogolaaday in uu hoos u dhigo canshuurta shidaalka ee markii la dhaqan galiyay bishan horraanteedii horseedday mudaaharaadyada iyo carada baaxadda leh.
Isaga oo khudbad u jeediyay qarankiisa ayuu madaxweynuhu soo jeediyay in uu kala bar ka dhigo canshuurtii la damacsanaa in la saaro shidaal oo hadda lagu kordhiyo 8%.
Waxaan horay u tabinay in Kenyyata uu diiday qorshe muddo labo sano ah dib loogu dhigayay canshuurta la kordhinayo, taas oo u muuqatay in uusan meesha ka saaraynin qorshaha ay dad badani ka soo horjeedsadeen.
Haweeney La Baadi-goobayay Oo Isku Dhiibtay Laamaha Amniga Dalka Kenya.
Haweeneydan oo lagu magacaabo Mumina Eroba oo ay Boliiska dalka Kenya madaxeeda dul dhigeen Hal Milyan oo Shilin Bil ka hor ayaa maqribnimadii Talaadada isku dhiibtay laamaha ammaanka ee dalkaasi. Waxaa lagu tuhusan yahay in […]
Dawlada Kenya Oo Ruqsadii kala Noqotay Shirkadda Madaxa bannaan Ee Qaybinta Shidaalka.(KIPEDA)
Waaxda arrimaha tamarta iyo jaangoynta qiimaha shidaalka(ERC) ee dalka Kenya ayaa ruqsada kala laabtay shirkadda madaxa bannaan ee qaybisa shidaalka (KIPEDA), ka dib markii lagu soo eedeeyey inay hor kacaysay mudaharaad looga soo horjeedo canshuur […]